Nyocha nke Samsung Galaxy Watch nọ n'ọrụ, yana ọnụahịa na atụmatụ | Akụkọ akụrụngwa
E nwere ụlọ ọrụ ndị na-aga n'ihu ịlụ ọgụ were mkpanaka nke alaeze smartwatch si Apple na Apple Watch gị, Otu n'ime ha bụ Samsung, n'ihi nke a, ọ kpebiri ịhapụ onwe ya Wear OS (nsụgharị gam akporo maka elekere anya) wee họrọ maka ikpo okwu nke ya na nsonaazụ ọma dị mma.
Anyị na-anwale Samsung Galaxy Watch ọhụrụ, ọnụ ala dị ọnụ ala iji rụọ ọrụ smartwatch na nkwojiaka gị. Yabụ, nọnyere anyị ma chọpụta ihe kpatara Samsung elekere a ji bụrụ aha ama ama na ọ na-agba mbọ iwetara anyị ahụmịhe kachasị mma na ikpo okwu ọ bụla.
Dị ka o mere n'oge ndị ọzọ, ebumnuche anyị bụ ịnye gị nyocha zuru oke nke ngwaahịa a, maka nke a, anyị ga-eleba anya na ngalaba niile anyị tụlere ịchọpụta na ọkwa nke ọrụ, arụmọrụ ma ọ bụ ụdị nkọwa ọ bụla ịchọrọ mara iji mepụta echiche banyere ịzụta n'ọdịnihu. Otú ọ dị, anyị na-akpọ gị òkù ka ị lelee vidiyo anyị na ndị ọrụ ibe gị si @Androidsis, ebe nrụọrụ weebụ nke ọkachamara na ngwaọrụ ndị na-arịgo gam akporo dị ka sistemụ arụmọrụ, chọpụta Samsung Galaxy Watch nọ n'ọrụ, "ọnụ ala" ọzọ na Apple Watch nke dị ka ịnọ. Ọ bụrụ n’ịchọghị iche maka ya ọzọ, ị nwere ike ịzụta ya na njikọ a site na naanị 199 euro.
1 Nzube na ihe onwunwe: Emezigharị na fechaa
2 Eriri na njirimara onye ọrụ
3 Ihe nlere Galaxy Watch
4 Ahụmịhe onye ọrụ yana nnwere onwe
Nzube na ihe onwunwe: Emezigharị na fechaa
Na ọkwa a haziri, Samsung na-aga n'ihu ịkụ nzọ siri ike na ọkpụkpọ, ọdịdị nke elekere ọkọlọtọ nke ọ jigidere kemgbe smartwatch mbụ ya na nke gosiri ọdịiche dị na ya na asọmpi ahụ. Anyị nwere ngwaọrụ aluminom nke nwere Gorilla Glass na ihu ya na nhazi 2.5D iji mee ka ọ dị mfe na-adị kwa ụbọchị. Anyị nwere 1,1 inch okirikiri, kpọmkwem anyị nwere 28,1 millimeters gburugburu. N'aka aka nri, anyị nwere naanị bọtịnụ abụọ ga - enyere anyị aka ịmekọrịta sistemụ arụmọrụ karịa ihuenyo.
Akụkụ: 39.5 x 39.5 x 10.5mm
Size Diameterkpọ oku n'obosara: 28.1 mm
Ibu ibu: 25 grams
Karịsịa anyị nwere ụfọdụ akụkụ nke 39.5 x 39.5 x 10.5mm nke ngụkọta nke 25 gram na-esote, n'eziokwu m nwere ike ịsị na ihe kacha ịtụnanya kwa ụbọchị nke ọrụ Galaxy Watch a bụ kpọmkwem ịdị mfe ya. You ga-enwe ike inweta ya na Spain na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, oji, pink na ọlaọcha, palette mara mma mara mma maka ọha na eze nke a na-agwa ya n'ụzọ doro anya.
Eriri na njirimara onye ọrụ
Kpachapụ anya Samsung ekwuola nke ọma na bezel na-agbanwe agbanwe nke ọtụtụ ndị hụrụ ya n'anya nwere na mbipụta ndị gara agaUgbu a iji soro ikpo okwu na-emekọrịta ihe, anyị enweghị nhọrọ ọ bụla ma ọ bụghị imetụ ihuenyo ahụ ma ọ bụ site na bọtịnụ abụọ ya. Nke a na-abụ aghụghọ mgbe ụfọdụ ịtụle nha ya na ogo ya.
Eriri bụ ihe ọzọ na-adọrọ mmasị ya, nke a Galaxy Watch nọ n'ọrụ jiri usoro arịlịka ọkọlọtọ na ụwa niile, N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ị ga-enwe ike iji ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụdị eriri ọ bụla, ị gaghị enwe ọrụ iji gafee akwụkwọ ndekọ aha ahụ, dịka Apple na-eme, dịka ọmụmaatụ, ma ọ bụ na ọ bụghị na ọ na-eme ka ị zọọ nzọ na nkwenye nke ntụkwasị obi a na-enyo enyo. Nwere ike ịhọrọ ụdị adịghị agwụ agwụ, ọ ga-adabere na mmasị gị na ihe ndị na-enye gị nwere ike ịnye, Na ngwugwu anyị na-ahụ eriri silicone nke agba nke elekere ahụ, nke nwere nha abụọ maka ụdị mmadụ niile na nke ahụ doro anya na ọ kachasị kwesịrị ekwesị maka egwuregwu.
Ihe nlere Galaxy Watch
Na ngwaike ngwaike nke bụ eziokwu bụ na Samsung Galaxy Watch nọ n'ọrụ anaghị enwe ihe ọ bụla n'agbanyeghị ọnụahịa ahụ, na ọkwa njikọ anyị nwere Bluetooth 4.2 obere ume (anyị amaghị ihe kpatara na ha ahọrọghị mbipute 5.0) na 802.11bgn WiFi na band 2,4 GHz. Na ọkwa nke atụmatụ dakọtara anyị ga-ekwupụta n'ụzọ dị mkpa karị bụ na anyị ga-enwe ike ịkwụ ụgwọ ya, ebe ọ bụ na anyị nwere njikọ NFC ma ga-ekwe ka usoro ọ bụla dị na nyiwe dị ka Samsung Pay. Emere ya maka egwuregwu, yabụ enweghị ike ịla n'iyi GPS, accelerometer, barometer, gyroscope, onye na-agụ ọnụọgụ obi na ihe mmetụta ọkụ gburugburu.
Akụrụngwa nke na-eme atụmatụ ndị a niile nwere okpueze 700 MB RAM, tinyere igwe nhazi abuo, na 4 GB nke nchekwa dị n'ime nke ga-adịgide na 1,5 GB ozugbo arụnyere sistemụ arụmọrụ, zuru oke maka ezigbo ọgụ nke ngwa n'ime ụlọ ahịa ahụ Tizen OS, otu o sila dị, anyị ga-atụ uche ihe ọzọ ịchekwa ọdịnaya dijitalụ dịka egwu. Cheta na anyi nwere a SuperAMOLED panel 1,1-inch na-enye mkpebi nke pikselụ 360 x 360 na a Batrị 230 mAh, ikike ọkọlọtọ na wearables. Na usoro nke iguzogide anyị nwere IP68 asambodo megide mmiri na ájá, na-akwado 5 ATM, yabụ ị nwere ike iji ya saa ya wee mikpuo ya obere na ọdọ mmiri.
Ahụmịhe onye ọrụ yana nnwere onwe
The nzọ nke Nke a Galaxy Watch na-arụ ọrụ site na usoro ikuku ikuku nke nwere ọkọlọtọ Qi Ọ ga-enye gị ohere iji uru nke ọtụtụ atụmatụ nke ngwaọrụ ndị ọzọ dị ka reversible wireless Nchaji nke ụfọdụ igwe. Nnwere onwe ga-adabere na iji anyị kwa ụbọchị, mana ị ga-ahụrịrị na ọ bụrụ na ị jiri GPS na nyochaa obi, Gaghị enwe ike ịrụzu ụbọchị abụọ ahụ, yabụ ị ga-akwụ ụgwọ ya kwa abalị. Ahụmịhe anyị n'ịgba ọsọ na ịgba ịnyịnya ígwè emeela ka anyị mata ya nke ọma, ị ga-akwụ ụgwọ ya kwa ụbọchị na nke a nwere ike bụrụ isi ihe na-adịghị mma.
Banyere ahụmịhe onye ọrụ, anyị ahụwo ọgụgụ ziri ezi na ọkwa obi nke fọrọ nke nta ka ha yie ngwaahịa ndị ọzọ dị elu dị ka ndị sitere na Garmin ma ọ bụ Apple, Tizen OS egosila na ọ bụ karịa sistemụ arụmọrụ ihe mgbaze, ọ bụ ugbu a ka ihe atụ na Samsung telivishọn ebe ọ zachara gam akporo TV, ma ugbu a, ọ mere otu ihe ahụ na Google wear OS.
Designdị dị mfe ma dị irè, nke nwere agba agba dị mma na eriri ụwa
Tizen OS na-arụ ọrụ dị ukwuu ma na-emezigharị
Kwadoro ụgwọ Qi
Ihe kacha masị m banyere ya Ọ bụ usoro nkwụnye ụgwọ nwere ụkpụrụ ga-enyere anyị aka itinye ya n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọnọdụ ọ bụla. Ebe Samsung na-achị kemgbe kemgbe na imewe, ibu-ihe onwunwe ruru na magburu onwe ya mma ihuenyo.
Nnwere onwe nwere ike iburu ngwaọrụ ahụ
Agbaghara m ntakịrị ihe n'ime ebe nchekwa
Gini na iji Blueooth 5.0?
Ebe ihe a Galaxy Watch nọ n'ọrụ pụtara nke kachasị pekarị mperi, ọ bụ ezie n'eziokwu, na-echeba ọnụ ahịa ya ọ na-efu m ịchọta ọtụtụ adịghị ike, itinye mana mana achọrọ m icheta nke ahụ o nweghị ọkà okwu. Can nwere ike nweta ya site na 199,99 na Amazon,Nwere ike nweta ya site na 199,99 na Amazon,elekere elekere nke ọma nyere arụmọrụ ya na ọnụahịa ya.
Samsung Galaxy Watch Ọrụ nyocha
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Nyocha » Samsung Galaxy Watch nọ n'ọrụ, anyị na-enyocha smartwatch dị ọnụ ala nke Samsung